Jinyun Jewelry yasungulwa ngo 2006. Inkampani yethu itholakala e Guangzhou, China. Sesiphila ezikhethekile ku Engagqwali Jewelry Isitolo esidayisa yonke impahla by B2B futhi iminyaka engaphezu kwengu-10 zebhizinisi e kulo mugqa. Kuze kube manje, besilokhu babebambisene abahlinzeki ezingaphezu kuka-300 kusukela ngaleso sikhathi futhi ukuba elula kunazo ukukhokhelwa indlela, amanani angcono kanye namasevisi kumakhasimende ethu.
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-100,000 imiklamo ehlukahlukene ungathola kusuka website yethu, www.julongsteeljewelry.com . Zonke izindlela ezintsha kuzobuyekezwa ngu isonto ngalinye kuze kuphele cishe abangaphezu kuka imikhiqizo 2000pcs entsha. Imikhiqizo ukwakha ezihlukahlukene kukhona kabanzi kakhulu futhi onganelisa ngokugcwele amakhasimende amaningi sihluke izidingo emazweni ahlukahlukene.
Sine kuka 10,000 ilungu olubhalisiwe kuthiwa kusuka emhlabeni wonke, bona ngokuvamile ukwenza ngendlela evamile kabusha isitokwe okuyinto kubalethele eziningi elula njengoba amakhasimende ethu badinga kuphela mayelana 3-15 izinsuku ukuthola izimpahla zabo. Sinikeza aphansi kakhulu izindleko izinto ezilula futhi eziwusizo yokukhokha indlela, ezifana Pay-pal, EFT, inyunyana Western futhi Imali igremu.
Uma unesithakazelo, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi.